» बुद्ध लामादेखि हरि खड्कासम्म ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ मा भिड्दै
बुद्ध लामादेखि हरि खड्कासम्म ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ मा भिड्दै
१८ भाद्र २०७७, बिहीबार १६:२८
मकवानपुर, १८ भदौ । चर्चित टेलिभिजन रियालटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स’ को नेपाली संस्करण ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ अब प्रसारणमा आउने भएको छ । सरकारले तय गरेको गाइडलाईनअनुसार सुटिङ गरेर शो प्रसार हुने भएको हो । २६ श्रृङ्खलाको यो कार्यक्रममा १२ जना स्टार कलाकारले एकएक जना प्रोफेसनल डान्सरसँग जोडी बाँधेर नृत्य प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेछन् । यस शोमा क–कसले भाग लिँदैछन् त ? आउनुहोस् यसबारेमा चर्चा गरौँ । हेर्नुहोस् यो भिडियो रिपोर्ट–
यस शोमा पहिलो नेपाल आईडल बुद्ध लामाले कोरियोग्राफर केबिका खत्रीसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । चर्चित गायकका रुपमा गनिएका बुद्धको केबिकासँगको केमेस्ट्री अहिले देखि नै चर्चामा छ । त्यस्तै नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्काले कोरियोग्राफर युमी बलामीसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । चर्चामा रहेकी युमी र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै चर्चा कमाएका चर्चित खेलाडीबिचको यो जोडीलेल तहल्का मच्चाउने देखिन्छ । त्यस्तै प्रशान्त ताम्राकार र स्वयत्ना योञ्जन, देवान्सी बैदावार र शुभम भुजेल, नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्की, नायिका पुजा ठाकुर र राजिव समर, गायिका ज्योति मगर र लाउरे सिंह, सृष्टि केसी र केशव थापा, फुलन्देकी आमा र प्रमोद भण्डारी, सरोज मोक्तान र रक्षा श्रेष्ठ, दिपा, दमान्ता र सुनिल लगायतका चर्चित व्यक्तित्वहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । भाईरल गायिका ज्योति मगरको चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
शोमा चर्चित नायक दिलिप रायमाझी, चर्चित नायिका गौरी मल्ल लगायतको टिमले निर्णायकको भूमिका निभाउने भएका छन् । हरेक साता हुने भोटिङबाट एलिमिनेसन हुने छ । यो शो हिमालयन टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार र शनिबार राति ८ बजे प्रसारण हुने बताइएको छ । ट्यालेन्ट, इमोसन, ह्युमर र कम्पिटिसनको फ्युजन रहने डान्सिङ विथ द स्टार्स बहुचर्चित फ्यामिली रियालिटी शो को रुपमा परिचित छ । शोका विजेताले कुल २५ लाख नगद र अन्य पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको लेटेस्ट जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।